AMD zara akwara Intel na ọgbọ nke abụọ Threadripper na 32 cores | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụrụ n'ụtụtụ a anyị na-ekwu maka etu Intel si eji mmemme dịka Computex 2018 na-esi n'ihu nke ndá »‹ á »zá» ya n'ahịa na a ihe nhazi ohuru, nke ha kwenyesiri ike na nke a, ewezuga na ejiri ya na 28 cores, ikike iji gbaa 56 eri na ọsọ ọsọ nke 5 Ghz, ihe nke hapụrụ anyị ọnụ anyị emeghe, anyị ekwesịghị ichere ogologo oge mara azịza ya AMD, na olee nzaghachi.
Kpamkpam na ntinye nke anyị raara onwe anyị nye Intel anyị kwuru maka nzaghachi nke AMD ga-enye Intel n'oge na-adịghị anya yana ọkachasị na data anyị na-amaghị, dị ka eziokwu ahụ bụ na, na nke kachasị elu, Intel rere ndị nhazi ya na ọnụahịa ihe dịka $ 1.999 ebe AMD mere otu ihe na $ 999. Na ọgbọ ọhụrụ a ihe yiri nke ahụ ga-eme, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche nke ahụ, naanị otu ụbọchị mgbe e mesịrị, AMD etinyela anụ niile na ọnụ mmiri.
1 AMD juru anyị anya na ọgbọ nke abụọ nke Threadripper, ọtụtụ ndị nhazi ya na usoro 32 dị mkpa na usoro 64 nke igbu
2 N'agbanyeghị ike dị na ya ọ na-enye, ọnụọgụ Threadripper nwekwara ọghọm ya
AMD juru anyị anya na ọgbọ nke abụọ nke Threadripper, ọtụtụ ndị nhazi ya na usoro 32 dị mkpa na usoro 64 nke igbu
Na-abanye zuru ezu iji kwuo banyere ọdịnihu na nhazi nke AMD wetara anyị, gwa gị na ọgbọ ọhụrụ Threadripper, nke ga-ebute ahịa ahụ n'oge mgbụsị akwụkwọ nke afọ a, ọnwa ole na ole tupu Intel amalite usoro nhazi ọhụrụ ya, ọ ga-eme ya yana ụlọ ọrụ na-enweghị ihe ọ bụla. 32 usoro cores na 64 eri na ga-agba ọsọ na 3 GhzObi abụọ adịghị ya, nkwupụta nke ebumnuche sitere na AMD, ụlọ ọrụ nke, mgbe ọtụtụ afọ gasịrị, agaghị ekwe ka Intel laghachi azụ ịbụ ihe ọ na-abụghị ogologo oge gara aga.
Dika AMD n'onwe ya kwuputara, o doro anya na iji weputa otutu isi na otu nhazi, ndi injinia ya jiri ya ọhụrụ Zepplein nwụrụ na 12 nanometer lithographic usoro. Dịka nkọwa, gwa gị na ndị a nwụrụ anwụ nwere isi asatọ n'otu n'otu, n'ụzọ dị otu a Threadripper mbụ jiri abụọ n'ime ndị a nwụrụ iji nye ihe kacha elu 16 cores. Ọgbọ nke abụọ a nke ọtụtụ ndị nhazi ga-emesị nwụọ anọ, nke ga-ezuru ha iji ruo 32 cores.
N'agbanyeghị ike dị na ya ọ na-enye, ọnụọgụ Threadripper nwekwara ọghọm ya
Akụkụ na-adịghị mma nke ọgbọ ọhụrụ nke AMD processors dị na oriri ike ha nwere. Iji mee ka echiche ahụ doo anyị anya, gwa gị na, ọ bụrụ na TDP nke ọgbọ mbụ nke ọkwa ndị a gaferela 180 W, na ọgbọ nke abụọ ha chọrọ mkpa ha. na-aga ruo na a gaghị echekwa 250 W, ihe anyị ga-eburu n'uche, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi ihe ndị ọkachamara ka anyị nwere mmasị ịwụnye nhazi nke nwere njirimara teknụzụ ndị a na sava anyị, nke a ga-eji mee ọtụtụ.
Mmachi ọzọ bụ na X399 chipset na-akwado naanị ọdụ nchekwa anọ maka asatọ dị mkpa ugbu a. N'ihi nke a, ọwa ọhụrụ abụọ a na-arụ ọrụ ugbu a enweghị kpọmkwem ebe nchekwa, ihe ga - eme ka ị gbachi nkịtị n'agbanyeghị, dịka AMD si kwuo, nke a apụtaghị na ọ na - emetụta arụmọrụ. Kpọmkwem site na ọnụọgụ abụọ nke ọnụọgụ na iwetu nha naanị 2 nanometers ndị a na-arụ ọrụ na-enye obere ogeMa ọ dịkarịa ala maka oge ahụ, nke 3 Ghz base na 0 Ghz na ọnọdụ Turbo, n'oge a, anyị ga-agarịrị AMD ebe ha gosipụtara na na nsụgharị ikpeazụ nke oge ọrụ a nwere ike ịdị elu. Banyere ebe nchekwa nchekwa, a na-atụ anya na na 3-isi mbipute a ga-abawanye na 4 MB.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Hardware » AMD zara akwara Intel na ọgbọ nke abụọ Threadripper na 32 cores